paydirekt 2.34.1-7759 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.34.1-7759 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
Application မ်ား ေငြေရးေၾကးေရး paydirekt
paydirekt ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
• Empfänger einfach aus Kontaktliste auswählen
• Emojis als Verwendungszweck nutzen
• Mit wenigen Klicks Geld an E-Mail oder Mobilfunknummer senden
• Du kannst auch Geld empfangen, wenn du kein paydirekt-Nutzer bist
• Übersichtliche Darstellung deiner paydirekt Zahlungen
• Benachrichtigung über jede Transaktion
• Die paydirekt App kommuniziert ausschließlich über geprüfte Schnittstellen und sorgt für einen sicheren Datentransfer nach den deutschen Standards zum Online-Banking
• Ein Zugriff auf dein Online-Banking Konto ist über paydirekt nicht möglich
• Alle Daten werden verschlüsselt auf deinem Gerät gespeichert
• paydirekt wird niemals Handel mit deinen Daten betreiben
• Deine Daten sind in von Banken zertifizierten Rechenzentren in Deutschland hinterlegt und unterliegen den strengen deutschen Datenschutzgesetzen
နောက်ဆုံးနေ့လယ်စာသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပေးဆောင်ခဲ့သလဲ သင်ဆဲပူးတွဲမွေးနေ့လက်ဆောင်တစ်ခုအဘို့ပိုက်ဆံရဖို့? အဘယ်သူမျှမပြဿနာ။ အဆိုပါ paydirekt app ကိုအတူသင်အလွယ်တကူငွေပို့ခြင်းနှင့်မေးလျှောက်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျအပြည့်အဝမြင်ကွင်းကိုအတွက်သင်၏အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုရှိသည်။ ယခုသင့်လက်ရှိအကောင့်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသုံးပါ - paydirekt အတူအွန်လိုင်းမှငွေပေးချေမှုစနစ်ကဂျာမန်ဘဏ်များနှင့်ငွေစုဘဏ်များသည်။
• Receiver ရိုးရှင်းစွာစာရင်းထဲက select လုပ်ပါ
• e-mail သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုအနည်းငယ်ကလစ်ပိုက်ဆံ Send
•သင်တစ်ဦး paydirekt အသုံးပြုသူများအနေလျှင်သင်တို့သည်လည်းပိုက်ဆံရရှိနိုငျ
• Clear ကိုသင့်ရဲ့ paydirekt ငွေပေးချေမှုဖော်ပြရန်
•ယင်း paydirekt app ကိုအသိအမှတ်ပြု interfaces ကနေတဆင့်သီးသန့်ဆက်သွယ်နှင့်အွန်လိုင်းဘဏ်စနစ်များအတွက်ဂျာမန်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီလုံခြုံစိတ်ချဒေတာ transfer သေချာ
•သင့်အွန်လိုင်းဘဏ်စနစ်အကောင့် Access ကို paydirekt မှတဆင့်မဖြစ်နိုင်ပါ
•ဒေတာအားလုံးကိုသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ် encrypted သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်
• paydirekt ကုန်သွယ်မှုသင့်ရဲ့ဒေတာတွေနဲ့လည်ပတ်ရမည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်
•သင့်ဒေတာတွေကိုဂျာမနီရှိဘဏ်များသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းဒေတာစင်တာများထဲမှာသိမ်းထားတဲ့နှင့်တင်းကျပ်သောဂျာမန် data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်
သင် paydirekt app ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား? ထိုအခါမူကားတစ်ဦးပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးကတည်းကရဲ့ပါစေ!
© EmojiOne (https://www.emojione.com/) ကအခမဲ့ထောက်ပံ့အီမိုဂျီ icon တွေကို paydirekt GmbH (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode) ကပြုပြင်ထားသော Emojis
paydirekt အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
paydirekt အား အခ်က္ျပပါ
sirkesyone-applikes စတိုး 1.42k 675.72k
paydirekt ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း paydirekt အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.34.1-7759
ထုတ်လုပ်သူ paydirekt GmbH
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.paydirekt.de/agb
App Name: paydirekt
Release date: 2019-08-14 10:08:41
လက်မှတ် SHA1: FE:2F:9D:A3:A1:43:A3:12:39:80:E9:F0:08:6A:3F:18:70:C9:1F:D4
ထုတ်လုပ်သူ (CN): paydirekt GmbH
အဖွဲ့အစည်း (O): paydirekt GmbH
paydirekt APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ